Kukkuyyee – Dandeettii Addaa
Jaallannee Gammadaa | VOA
WASHINGTON DC — Sabaa himaa adda addaa irratti namoonni sagantaa qoosaa ykn baacoo adda addaa dhiiyeessuun beekaman ni jiran. Garu dandeetti kana qabaatanii carraa uummatatti ba’u kan hin argatiin danuu dha.Qosuun biyya alaa keessatti akka oogumaatti fudhatamee namoonni jireenya isaanii ittiin gaggeessan akkuma jiran kanneen ija tuffiin ilaalamanis jiru.
Dargaggoo umriin isaa 29 ta’e Alamaayyoo Amsaaluu sagalee isaa akka namoota umrii fi saala adda addaa-tti jijjiree dubbachuu fi qoosuu danda’a. Kana qofa otoo hin taane walaloolee adda addaa fi oduu barreessuu kan danda’au ta’uu dubbata. Dandeettiin isaa ittiin jiraatu garuu isa kana miti. Barataa barnoota amantii ykn Tiwooloojii waggaa afuriif baratee waxabajji 22 bara 2013 eebbifamuuf deema. Dargaggoota waliin gama hundumaan hojjechuun hawwii koo ti jedha.
Jun 24, 13 at 1:58 am
Dansaa dha garuu, maaliif jechoota afaan amaaraa itti makta???????? Ishii, Geta kibru yisfa, …….Qubee generation afaan isaa kan Oromoo 100% qulqulleessee dubbachuu qaba. Kanaan achi jabaadhun siin jedha.